Nvidia nzọ na ọgụgụ isi na GPUs Tesla P40 na Tesla P4 | Akụkọ akụrụngwa
Nvidia maara nke ọma etu ụlọ Pascal ya ga-esi gaa, maka nke taa, anyị nwere ihe dị n'ahịa dịka GeForce GTX 1080 ọhụrụ ma ọ bụ na nso nso a. Nwelite uzo Tesla nke, dịka ụlọ ọrụ ahụ na-ekwuwapụta, ugbu a na-achọ itinye onwe ya dịka otu n'ime nhọrọ kachasị ike maka gburugburu ọgụgụ isi gburugburu, netwọkụ ntanetị yana ọbụnadị mmụta mmụta miri emi.
N'ihi ebumnuche a, taa, anyị nwere ike ikwu banyere ihe ọhụrụ Nwee P4 y Nwee P40, nke e kere dị ka ọgbọ na-anọchi nke ndị a maara dị ka Tesla M4 na Tesla M40 gosipụtara naanị otu afọ gara aga. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, kaadị ọhụrụ ndị a gafere ihe ruru okpukpu anọ nke arụmọrụ ndị gara aga, na-adị mma ọbụlagodi iji otu sava n'ihi ike ha na ike ha.
1 Otu Nvidia Tesla P4 nwere ike dochie sava 13 dabere na sava
2 Nvidia Tesla P40 dị ka elu nke elu ugwu
Otu Nvidia Tesla P4 nwere ike dochie sava 13 dabere na sava
N’ịje obere nkọwa zuru ezu, anyị hụrụ Nvidia Tesla P4, kaadị na-apụ apụ maka obere oriri ya, nke dị n’agbata 50 na 75 watts, yana ịnwe oke nkenke karịa nke nwanne ya nwanyị bụ Tesla P40. N'ihe banyere ike, kaadị a nwere ike ịchụ àjà 5,5 teraflops, Arụmọrụ puku ijeri 22 kwa nkeji nke abụọ INT8, 2560 CUDA Cores na 8 GB nke GDDR5 ebe nchekwa nwere bandwidth nke 192 GB / s.
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị na-ekwu maka data nke na-adọrọ mmasị karịa kaadị nke ụdị a ebe ọ bụ na, n'ihi oriri na ike, ha na-eme ya, dịka Nvidia kwupụtara, ruo Oge 40 dị mma karịa GPU. Na mgbakwunye na nke a, ihe nkesa nke ejiri otu n'ime kaadị ndị a nwee ike dochie ihe nkesa na 13 CPU, na-enweghị mgbagha karịa ule na-adọrọ mmasị nke ihe Nvidia Tesla P4 nwere ike ịnye.
Nvidia Tesla P40 dị ka elu nke elu ugwu
Nke abụọ anyị na-ahụ ụdị ahụ Nwee P40, otu nhọrọ nke ga - abụ ihe kachasị elu site na ike ngụkọta nke teraflops 12, ikike ịrụ ọrụ ruru ijeri 47 kwa nkeji INT8 ekele maka 24GB nke nchekwa GDDR5 na bandwidth nke 346 GB / s na 3840 CUDA cores. .
Ọ bụrụ na anyị etinye ihe a niile n'ọrụ, dịka Nvidia si kpọsaa, a ihe nkesa nwere kaadi Tesla P40 asatọ ga-enwe ike dochie ihe nkesa na-adabere na 140 CPU nke, dịka ị pụrụ ịhụ, ga-anọchi anya nchekwa na ụgwọ na akụkụ dị elu. Na mgbakwunye na nke a, ikike ya ga-adị mma maka iji ya na ngwa ndị metụtara ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ, robotics na, karịa ihe niile, usoro ọgụgụ isi.
Ozi ndi ozo: anandtech
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Nvidia na-etinye aka na ọgụgụ isi na Tesla P40 na Tesla P4 GPUs